Udliwano-ndlebe noTshintsho lweNkwenkwezi yokuzalwa uK Katie Leclerk
Ngaphezulu kweminyaka embalwa edluleyo, ezinye zeenethwekhi ziye zafumana inkathazo ekufumaneni i-niche yazo kwaye, ukulinganisa kuye kwaye kwancipha kumazinga anesantya. Nangona kunjalo, kukho abambalwa abakhethiweyo abaye bakwazi ukuvelisa oko ababukeli babo bafuna kwaye baqhubeke befaka igolide. Ngenye ihlobo, i-ABC Intsapho inamathela kwisihlwele esaselula / esincinci sabantu abadala kwaye ngokuqinisekileyo, iqhutywe ngokutsha ngonyaka.
I-ABC yentsapho ye-du-jour iyona umdlalo othakazelisayo Utshintshiweyo kuNzalo, uchungechunge malunga namantombazana amabini aselula athola ukuba aguqulwe ngengozi ngexesha lokuzalwa.
Omnye (Bay) wakhula kunye nobutyebi kunye nelungelo, ngelixa omnye (uDaphne) wakhula kunye nonina owayengumzali ongenamzali waza waba sisithulu emva kokuxhamla kwe-meningitis.
Ndandinomdla wokuthetha kunye noKaris Leclerc (uDaphne) ocolileyo kwaye ohlekisayo, owamana naye iingcamango zakhe ngokudlala umdlalo ongenathulu, indlela awayeyilungiselela ngayo indima enzima kunye nendlela aqhubeka edibanisa ngayo nabalandeli bakhe ...
Umbuzo: Unobutsha ngokutsha kwilizwe elibambileyo, yintoni eyenza wenze isigqibo sokungena kwi shishini?
UKay Katie uthi: "Ndiye ndisebenza ngokumalunga neminyaka elishumi.UndibenguAnnie kwimveliso yam ephakamileyo ka- Annie . Xa sathuthela eKalifornia, ndincenga abazali bam ukuba bangise kumzi omkhulu kwaye ndivumele isandla sam Ngombulelo, malunga neminyaka elishumi kamva ihlawulwe. Kuze kube ngoku, ndenze amashishini amancinci, amavidiyo omculo kunye neenkalo ezimbalwa kunye nemiboniso embalwa yeTV, kodwa le yendima yam yokuqala ebalulekileyo kwiinto zonke.
Ndivuyisiwe kwaye ndiqhayisa ukuba le projekthi kwaye ndivuyiswe ukuba ndinako ukwabelana ngalowo wonke umntu. "
Umbuzo: Nguwuphi umsebenzi ongeyena msebenzi owake wabakho?
UKay Katie: "Oo mntu - ndasebenza kumntu owayeneenkclub za ebusuku kwaye ndiza kuthi yinto yam encinane yam intandokazi. Ndandingummkeli wamkela malunga nonyaka kunye nesiqingatha."
Umbuzo: Yiyiphi eyona ndlela isiluleko esiphezulu kakhulu esinikeziwe?
UKay Katie: "Ndicinga ukuba isiluleko esilungileyo sisuka kubaba, kwaye akunjalo into enokuyenza ngokusebenza ...
Ngaphambi kokubambisana okukhulu, wathumela isiqhamo esikhulu kwisitampu sam kwaye ikhadi lathi, 'Chaza umzuzu, ungavumeli umzuzu uchaze wena.' Ndacinga ukuba loo nto ipholile yaye yayinzulu kwaye into endiyifunayo ngokwenene ukuba ndive ngelo xesha. "
Umbuzo: Walungiselela njani indima yakho ekutshintsheni ekuzalweni ?
UK Katie uthi: "Ndifumene uphicotho kwi-arhente yam kwaye ndithandana kakhulu nalo mlingane ngokukhawuleza. Ndinezinto ezifanayo kunye naye kwaye ndiyakwazi ukudibanisa nenani leendlela ezahlukeneyo naye. Ndahlala phantsi nababhali nabavelisi emva Ndiyifumene kwaye ndasebenza nomqeqeshi wokubhala ukuba ndilahleke ukuba yintoni ukulahleka kweentetho zikaDaphne kunye nokuba yiyiphi amagama ayayikwazi ukuthetha. Le nto yayingumngeni onzima kum. Xa ndandineminyaka engama-20, ndafumanisa ukuba ndikho into ebizwa ngokuba yi-Meniere's Disease, eyinkinga yokugcinwa kwamanzi entle, kwaye oko kwandinceda ukuba ndifanelekele indima. Ndicinga ukuba bambalwa kakhulu abantu abazi ngesifo, Kutheni ndivuyiswa kakhulu ngale nxaxheba. Ukudala ulwazi kunye nokwenza abantu bazi ukuba zeziphi izifo zeMeniere kwaye akukho nonyango. Ngethemba kwiminyaka embalwa ezayo bangenza intuthuko ethile yonyango kwaye ndingathanda ukukholelwa ukuba mhlawumbi bancedwa ukuba yinxalenye yale nto encinane y. "
Umbuzo: Kuthatha ixesha elingakanani ukuba ufunde ulwimi lwezandla?
UKay Katie: "Ndiyifumene esikolweni esiphakeme iminyaka emibini.
Njengoko uyazi, xa uthabatha ulwimi lwangaphandle kwisikolo esiphakeme, awukwazi ukuqonda ngokupheleleyo okanye ukuqonda kakuhle, kodwa ulwimi lwezandla lukhulu kuba nangona ungazi igama ngalinye, unako ukuthetha umntu. Yilwimi oluhlala kakhulu. Emva kweminyaka emibini, ndandithembekile ngokwaneleyo ukuba ndiphume ndize ndibenze abahlobo abayizithulu kwaye ndibandakanyeke kwizithulu. "
Q: Sitshele ngendima yakho ekutshintsheni ekuzalweni ...
UKray: "UDaphne uyintombazana yesikolo ephakamileyo ekhuselekileyo emantombazaneni, edlala ibhaskball kunye nompheki omuhle ... uyintombazana eqhelekileyo ngeendlela zonke ezinokwenzeka, ngaphandle kokuba uyisithulu, eyona nto iphantsi kwesihlobo yomntu lowo. Ufumanisa nge-15 1/2 ukuba le nto yenzeke kwaye yafika ekhaya kunye neentsapho ezingafanelekanga kwaye kuvela ukuba akubi kakhulu.
Unina, uRegina (uConstance Marie) wenza umsebenzi obalaseleyo ekubeni ngumzali omnye kunye nokuba nomntwana oyisithulu kunye nayo yonke imingeni ezayo. Ngexesha elifanayo, udibana naloo ntsapho intsha ezele abantu abaninzi. Ndicinga ukuba uDaphne unombono omuhle ngokwenene kwizinto eziqhubekayo kwaye unomdla wokuba ube nentsapho yakhe entsha. "
Umbuzo: Ngaba uyaxhoma kunye namalungu akho axotshiwe?
U-Katie uthi: "Ewe, xa umbukiso wawususwe sonke sasiya endlwini kaLucas kwaye sasinomdla omhle kwaye ndawabhaka ikhekhe. Kwakunomdla ukubona umkhiqizo wokugqibela phakathi kwabahlobo abatsha. Kwakuyi-closet ye- High School Musical fan, ngoko ke ukumenywa endlwini yakhe yayipholile. U-Vanessa kunye nam ndihamba njengama-peas kunye neeqathi, uyamangalisa kwaye ndiyamthanda! 'iwashi kusasa kwaye sasingabini inja-sidiniwe, ngoko sagqiba ekubeni sithethe nabanye xa sihamba ekhaya ukuze singayi kuphanga. Ngokwenene uya kumntu owona mhle kunene.Kwinkqubo yokuba yintsapho kwi--krini, saba ngumnye-onkrini. Kwakungelona nto ndiyilindele, kodwa ndiyabulela ngokwenene. "
Umbuzo: Yintoni into oyithandayo oyenzayo phakathi?
UKay Katie: "Xa ndifumene ikhekhe yokuqala, into yokuqala endiyenzayo yayihlawula ityala lam. Into yesibili endiyenzayo yayikuthenga i-iPad 2, ngoko-ke phakathi kwam thabatha ndidlala yonke loo mdlalo enomdla, imilutha."
Umbuzo: Ngaba ulandela nayiphi na imiboniso yeTV?
UKay Katie: "Ndilandela, kwaye."
Umbuzo: Ngaba usebenzisa i-Twitter okanye i-Facebook ukuze uhlale unxibelelana nabalandeli bakho?
UK Katie: "Ndisebenzisa i-Twitter @katieleclerc.
Q: Nantoni na into ongayithetha kubalandeli?
U-Katie uthi: "Ndiyabonga ngokubukela - iinguqu kunye nokujika kuya kuhlanganisana kwaye ukunyaniseka kuya kuhlawula ekugqibeleni kuba yonke into iyaza isangqa esipheleleyo. Ndivuyayo ukubona indlela abantu abasabela ngayo kwixesha lokugqibela."
Iingcaphuno ezingalibalekiyo 'Ku-Anne weGreen Gables'
IiJamani, zase-Austrian, ne-Swiss National Anthem
Ubuncwane kunye neNyanga - Uluphi uxhumano?
Funda igama lesiFrentshi elithi Maudit
Nonoxidizing Acid Inkcazo